GAR-WARAABE (gabay) | DAL-JIRE
saa u noolyahay!!”
Si walba ha jirtee gabaygan waa noocadda loo yaqaan ‘gabay dheegga’, Gabay dheegashu waa raacidda siiqad gabay oo qof hore lahaa iyo u ekaysiintiisa, gaar ahaan habdhaca meerisyada, iyo shubaaliska luuqda. Inta badan gabayada caanka ah ayaa la gabay dheegaataa, dhammaantii ama qayb ka mid ah. Iyadoo xusuusta qofka lagu dhawaanayo, waxa loo isticmaalaa madadaalo ahaan iyo ujeed labadaba.
sheekada waraabaha ayaa I xasuusisay gabay caan ahaa oo darwiishkii shaacirka ahaa ee Ismaaciil Mire Cilmi (IHUN) kula hadlayay Guuguule xilli ay dhacday abaar oodo lullul ahi, Wuxuu uga awaalo warramayaa xaaladii naflaha dhammaantii ku sugnaa wakhtigaa, xog iyo waanaba wuu siinayaa, laakiin isba wuu ogsoonaa Guuguuluhu inaanu gabaygiisa dhag ku shubanayn, wuuse kula eray baxayaa, waxaanu u taariikhaynayaa una wacaalo tabinayaa dadkii joogay iyo inagaba.
Isagoo adeegsanaya mid ka mid ah farshaxnimada afsoomaaliga ee Af maldaheedyada, gaar ahaan ‘Qofaynta’ wuxuu odhanayaa:-
“Guuguulayahow haddaad guga u ooyeyso,
Geelii adduunka u adkaa gobollo waydowye,”
wuu sii wadayaa gabayga, isagoo dad, xoolo, iyo duurjoogba xaaladaha ay ku suganyahiin wax ka tilmaamaya, gabagabada gabaygana waxuu ku soo naqtiimayaa sidan.
“Geedaha sun baa loogu daray geerinaw badaye
Gaagaabso oo joog ayaan gaadh lagaa qabane”.
Gabaygan soo socda oon u baxshay ‘Gar Waraabe’ waxay si isku ujeed u yahiin kaa abwaankii waynaa ee Ismacil Mire (IHUN) mariyay qarni ka hor, dhaaxa uu wakhtiga iyo waayahuba kala gadisanyahay, waxaan kula hadlayaa waraabaha ka digo roganaya bahalka ee noqonaya xoolaha la dhaqdo. Inkasta oonan waxsoosaar badan oo maanso wili ku dhiirran, maansada aan dheegtay iyo taydana aan la isku dhererin Karin, haddana hal-abuuridda gabaygani waxay salka ku haysaa jacayl aan u hayo suugaanta guud ahaanteed, Ismaaciil Mire na (IHUN) waa mid ka mid ah abwaanada jacaylkaas iigu abuuray, foolaadnimadiisa xagga tirinta maansada iyo hurmoodnimadiisa farshaxannimo ee uu dhaxalka nooga tagay, iyo dhamman afmaalka soomaalida.
wuxuu odhanayaa Gar-Waraabe:-
Waraabaha ciyaayoow haddaad dhiilo warinayso
Oo aad wadeecada adduun waaxidkaa filatay
Oo aad hunguri waalli qaba waarid kaga roortay.
Ayna wayrax awgeed habeen wiida ladi wayday
Waayeel gaboobaan ahaye gaar aan kuu waramo
Wanaag maaha adiguun inaan wiirsi cabataaye.
Wacdaraa qabsaday uumiyii wadar ahaantiiye
Wax-xillaa dhammaan lagu huriyo wad iyo laayaane
Waddankii milgaha wayn lahaa waa la iibsadaye.
Walaalnimadii loo wada sinnaa waayirkaw go’ane
Wilaayooyinabay kala noqdeen habar wadaagtiiye
Labadii xil weecshaba midbaa weerka loo dhigaye.
Duurjoog wuxii fara lahaa waaqla’ aan noqaye
Wadar wadartii kala foofi jiray waa wasto la’aane
Waxyeeladii ninkii gamay badaa carradii waydaarshay.
Geelaan wax lagu doorsan jirin waab ma soo galo’e
Waris caano kama soo listaan wiilashii jiray e
Dawliskii walwaal kuma ridaan si ay waraashaane.
Geedihii jirrida wayn lahaa waa la gaamuraye
Doonyaaba lagu waarida damalkii waabnaaye
Kaymihii waxays kugu baxeen wahel la’aantaase.
Waqal kuma dul furo jiidahii kaymahu wadhnaaye
Harraadbaaba laga soo warshaa jiinka wabigiiye
Gaawihii la waydhaafin jiray weel ma dhaamiyo e.
Wasakhbaaba lagu hoos qubaa wacan baddeediiye
Waabay la qooshaa intaa laga waraabshaaye
Wax kunoolaheedii dhammaan wuu ka caariyay e.
Waayeel intii talo lahayd waa la duudsiyaya e
Arin lagama waydiin islaam waagii dabadeede
Wax ma tare ayaa lagu goblamay, waxari dhaantaaye.
Waracnimo la xoor ruux hadduu waysadii qabo e
Waanadii dhagaha laga furee waliyo sheegeene
Nin warxumo tashiiliyo danlaa wiishka maamula e.
Wiswisbuu ibliis kala dhex dhigay talo wadaagtoode
Naxlibaa wadna loogu riday wada jirkoodiiye
Mid markuu wakiyabuu kan kale wiiqmayaa adhaxe.
Wilwilada iyo dhaantada go’lihii wishiran jiray tuurye
Wadiiqadii siraadbuu tahriib waydnimo u hadhaye
Hilbahiisii oo wadhan tukaa weel ka buuxsadaye.
Cawradaan wareeg shishe aqoon looga wace boone
Waalidkii dhaliyo laga cad goo warasadeediiye
Dirqi wecel suryeeyay u taal, waayahaa gabye.
Wajigoodu gubay duul hadduu Waaxid caasiyo e
Waxyigoo la koodaa ducfuu kula walaalayne
Waa kan i wadaagee kufrigu waaxba goor cunaye.
Waaryaa dhurwaa cali lug yare waad is moogtahaye
Dhaaxaad wankii daylo iyo waxaro qaadeene
Dhaaxaad nin wayn hilbihii kaaga go’ay walaqsanayseene
Dadku ceebaahaad wada lahayd kuuma wariyaane
Weerbaaba diyo loo xukumay waaqii nabi nuuxe
Adna waaban kuu yaabayaa waaga soo maqane
Waranliyo wadaadkuba aduu weerar kuu yahaye
Wacadbaaba laysugu mariyo dhaar wallaahiya e
Sida waasac in lagu maashabaan wiigan kuu baqiye
Waalalawga badan dhaaf ayaan nacab ku weetayne.
Wax kastoo la soo maray horuu wawga ugu yiille
Ana kama dardaarwarin Ilaah wadiiqadiisaaye
Wadhi karilay isagaa bixiya doorkay weecato e
Iyadoo is wada waadacduu wabax taraarshaaye
Wacadkuu maraan kaga gam’aa Waynaheen magane.
W/Q: Dhamme Maxamuud Axmed
This entry was posted on September 3, 2012, in Hoyga, Suugaan and tagged dhacdo, dhidar, dhurwaa, Gabay, gabay dheeg, ismacil mire, sheeeko xiiso leh, suugaan, waraabe. Bookmark the permalink.	Leave a comment
← Murida Maanta: Gaarriye
MA NOOLE AAN DHIMAN! (sheeko gaaban) →